José Calvo Poyato. Kubvunzana nemunyori weLa travesía yekupedzisira | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: José Calvo Poyato. (c) Pepe Travesía. Kutendeseka kweIngenio de Comunicaciones.
Jose Calvo Poyato ane basa rakareba semunyori wemabasa akakurumbira enhoroondo uye semunyori wenhau, pakati pavo ane mazita Tsinga yamambo, Kubvumirana muMadrid, Bhaibheri Dema, Dhiragoni Mukadzi o Kurota kwaHypatia, pakati pevamwe. Ndatenda chaizvo nenguva yawakapedzera pane izvi indavhiyu kwaanotiudza nezvenhoroondo yake yazvino, Rwendo rwekupedzisira, uye nemimwe misoro.
José Calvo Poyato - Bvunzurudzo
LITERATURE NEWS: Iwe uchangobva kuburitsa inova nyowani kumusika, Rwendo rwekupedzisira. Chii chaunotiudza mairi?
Rwendo rwekupedzisira iri, neimwe nzira, a kuenderera kwenzira isingaperi, umo maiverengerwa denderedzwa rekutanga pasirese naJuan Sebastián Elcano. Iye zvino, mutyairi weSpanish, akaberekerwa muGetaria, anova musimboti wenoverengeka mairi zvinoudzwa zvakaitika kwaariMushure mekutenderera pasirese kekutanga, nekuti Elcano anonyangarika mumabhuku enhoroondo uye hunhu hunoratidzika hwakakosha zvakakwana kuti isu tizive zvakaitika kwaari. Wedzera kune izvi kuti makore iwayo aitevera kutenderera kwekutanga pasi rose aive akazara nezviitiko zvikuru munhoroondo yedu.
Bhuku rekutanga randakaverenga raive nhoroondo yemakonzo. Yakanga iri rimwe remabhuku iwayo neWedhiyo Bruguera mairi zvinyorwa zvainge zvakabatanidzwa nekomiki. Iyo comic yakaverengwa kutanga. Dzimwe nguva chingori comic. Takanga tiri vana vemakore manomwe kana masere ekuberekwa. Ndinofunga vakandipa apo pandakaita chirairo changu chekutanga, ndakanga ndisati ndave nemakore manomwe.
Nyaya yekutanga yandakanyora uye icho chakazove bhuku chaive chidzidzo cheakaitika padambudziko regumi nemanomwe zana mutaundi rangu: Dambudziko rezana regumi nemanomwe century muVilla de Cabra. Yakahwina mubairo uye ndosaka yakaburitswa. Pave nemakore mashoma kubva ipapo.
Ndinoyeuka ivo vakandiorora, senge wechidiki, mabhuku aMartín Vigil, se Hupenyu hunobuda kunosangana. Zvakare izvo zve Maxence Van der Meersch, sa Miviri nemweya! Semunyori wenhoroondo, ndinorangarira kuti rimwe zhizha ndakaverenga zvese Zvikamu National veGaldós. Ndakaororwa. Ndinofunga kuverenga ikoko zvakakurumidza kufurirwa , que Ndakaguma ndave munyori wenhoroondo uye Ini ndaifarira nhoroondo yenhoroondo. Panguva iyoyo hazvina kumbopinda mupfungwa dzangu kuti rimwe zuva ndini ndaizozvinyora.
Ndatotaura kune izvo zvinofungidzirwa naDon Benito Pérez Galdós. Ndine shungu nazvo Quevedo uye yevakuru vanyori vezvinyorwa zvezana ramakore regumi nemapfumbamwe se Honoré Balzac kana Victor Hugo. Pakati pevanyori vazvino, vandinoda vari Jose Luis Corral, tenzi wechokwadi wenhoroondo yenhoroondo. Miedzo ye Juan Eslava Galan uye mabasa aDon Antonio Domínguez Ortiz kuSpain yeHabsburgs uye XNUMXth century.
Madame Bouvary. Zvinotaridza kwandiri kuti ndiye mumwe weakanakisa anodhonzwa mavara mumabhuku enguva dzese. Kwete kusiiwa kumashure Razaro, protagonist we Iyo Lazillo de Tormeskana Sancho Panza. Ose maviri anoita kunge akakura kwandiri kune kwavo mareferenzi uye zviitiko zvehupenyu.
Ndinowanzozviparadzanisa Zvakanaka chaizvo, kundibvumidza kunyora munzvimbo uko kune vamwe vanhu vari kutaura. Ndokusaka ndichiwanzo nyora mukicheni kubva mumba mangu, nzvimbo yekuunganidzira mhuri. Pandinogadzirisa kwekupedzisira kwemavara kuti ndiendese kune mapepanhau, ndinowanzozvipatsanura ndoverenga pasina zvinondikanganisa. Dzimwe nguva ndinonyora -Kunyora chikamu chekupedzisira chekunyora- kwemavhiki mazhinji uye panogona kunge paine kusaenzana, shanduko mutinhimira, iyo inofanirwa kugadziriswa. Saka ini ndinoda kuve ndega uye ndega.
Sezvandamboreva, ini ndinogona kuzviita chero kupi uye ikozvino Handina nguva dzandinoda. Pane dzimwe nguva dzaaifarira kunyora husiku. Asi nekufamba kwenguva ndakapedzisa izvozvo inofanirwa kunyorwa kana munhu agadzikana, akasununguka. Dzimwe nguva mumwe anosimbirira kunyora - Mupfungwa yekunyora - uye mazano haafambe. Munguva idzodzo zvirinani kusiya. Pane nguva apo, pane zvinopesana, zvese zvinouya zviri nyore uye iwe unofanirwa kutora mukana nazvo.
Kunze kwenhoroondo dzenhoroondo, ndakaverenga zvakawanda chinyorwa chenhoroondo; mushure mezvose, ini ndiri munyori wenhoroondo. Ndakaverengawo nhema nhemaese ari maviri echinyakare Dashiell mhando hammett kana Vázquez Montalbán seyazvino nyaya yematsotsi. Vaverengi vazhinji vanochengeta kuti mumanoveli angu panogara paine zano dema iro, pasina kunyatsoitika munhoroondo, rinobatika uye nekudaro rinokodzera mushe nhoroondo yenhoroondo.
Ndapedza Infinity mutsanganaIrene Vallejo. Ndiri kuverenga Zvombo zveChiedza, ivo Sanchez Yakashatauye Mambokadzi akanganwanaJosé Luis Corral. Iwe wakamirira biography yaCarlos III. Ndiri kutsvaga ruzivo pazvinhu zvishoma zvinozivikanwa zveSpanish XNUMXth century muzana rechipiri.
Pamwe ndizvo zvakanyanya kuoma mumakore apfuura. Dambudziko rakatanga muna 2008 rakakanganisa zvakanyanya nyika yemabhuku. Vanyori vakanaka kwazvo vakasara vasina muparidzi. Zvakanga zvakaoma zvikuru. Kune izvozvi vanyori vazhinji vane fungidziro yekutsikisa, asi mikana ishoma. Iko kune mukana wekushambadzira kwedesktop, asi pakadaro kugovera kunokona, izvo zvakakosha. Zvinosuruvarisa kuti nyaya zhinji, dzakanaka kwazvo uye dzakataurwa zvakanaka, hadzioni mwenje kana kuuona nenzira shoma.
Dambudziko redenda ratiri kusangana naro zviri kuoma kwazvo. Kwete chete kune mushakabvu uye vanorwara vari kunetseka kupora. Zvakare nekuda kwekuvharirwa, kurambidzwa, kufamba kana kufamba kwakabatana kunosanganisira. Icho chinhu icho nzanga yedu yaisatarisira. Aya madenda akakanganisa mamwe matunhu epasi, asi anga asiri dambudziko muEurope.
Kwandiri pachangu, zvave zvichitsungirira. Ndinogara mutown house - Zvese zveumbozha mune aya mamiriro - y iro basa remunyori rakanyanya kusurukirwa, kunyangwe ini ndichinyora dzimwe nguva, pakati pekuungana kwemhuri. Ini ndinofunga tinogona kutora mhedziso kubva pane zviri kuitika sekuti isu tiri vatadzi kupfuura zvataifunga, kuti lkuzvininipisa kunokurudzirwa zvikuru kana kuti moyo murefu, munzanga inotungamirwa nekukasira uye nekukasira, zviri nyore kuti tidzidze kuukudziridza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » José Calvo Poyato. Kubvunzana nemunyori weLa travesía yekupedzisira
Zvakanaka, ndichatsvaga basa remunyori uyu nekuti iro randinoda zvakanyanya inyaya yenhoroondo uye mabhuku enhoroondo.